Orinasa Ambatovy sy ny Lalao « Tretrika 5 » Norombahin’Andasibe ny omby natao amboara
Nanohana ny fikarakarana fifaninanana baolina kitra, nantsoina hoe « Tretrika » andiany faha-5, nandraisan’ireo tanora avy amin’ny kaominina Ambanivohitra dimy : Ambohibary,
Andasibe, Ambatovola, Beforona ary Morarano Gara sy ny ekipan’Ambatovy niorin tamin’ny taona 2017 ny orinasa Ambatovy. Nokendrena tamin’izany ny hanohananany fampivelarana ny maha izy azy an’ireo tanora ao anatin’ny faritra iasan’ny orinasa. Ny hanampy ny tanora hanana toe-tsaina tia miara-miasa amin’ny hafa, manaja nyfitsipika misy, hanao tsaratsara kokoa noho ny teo aloha, amin’ny alalan’nyfanaovana fanatanjahantena no tena nimasoana tamin’izany ary ny tombontsoa entin’ny fanatanjahantena ho an’ny vatana sy ny fahasalamana. Nokendrena fatratra ny hahatonga an’ireo tanora ho tomponandraikitra amin’ny ataony, ho mpitarika sy ho mpandray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny kaominina misy azy. Tanora lahy sy vavy nanodidina ny 500 no nandray anjara tamin’ity hetsikafanatanjahantena ity hatramin’ny niforonany ka momba ny andiany 2019 manokana dia resin’ny solontenan’i Morarano Gara tamin’ny isa 1-0 ny ekipan’Andasibe nandritra ny lalao famaranana notanterahina ny 6 oktobra 2019 lasa teo.Norombahin’izy ireo tamin’izany ny amboara sy ny omby ary kojakoja ho an’nyfanatanjahantena izay natolotry ny orinasa Ambatovy. Nahazo baolina sy fanamiana avyamin’ny orinasa kosa ireo ekipa rehetra nandray anjara